Celeb စတိုင် | စက်တင်ဘာလ 2021
အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး ဒိုင် စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ် အပြင်အဆင် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် စိတ်ဖိစီးမှု၏ အစားအသောက် Celeb စတိုင် အခြား မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း
တစ် ဦး က Trend ရွေးချယ်လို့မရပါဘူး? မင်းရဲ့ဇodiacကမင်းကိုကူညီပေးပါစေ!
အမျိုးအစား Celeb စတိုင် 2021
ပြီးပြည့်စုံသောစတိုင်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်သင်၏နိဒါန်းနိမိတ်လက္ခဏာအတွက်ရွေးထားသောအကောင်းဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ရေငုပ်ပါ။ p အတွက်သင်၏နိဒါန်းနိမိတ်လက္ခဏာအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းများသို့ငုပ်ပါ
SAG 2021 တွင်အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်ထားသောလူသိများသူများကိုကြည့်ခြင်း
Print Play ကိုလုပ်ရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောနာမည်ကြီးများကဲ့သို့ပုံနှိပ်ပြဇာတ်တွင်စွဲစွဲမြဲမြဲပါဝင်သည့်ထိပ်တန်းဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်ပုံစံများ။ ch ကဲ့သို့သောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောထိပ်တန်းချစ်စရာကောင်းပြီးစတိုင်ကျသည့်နည်းလမ်းများ
သင် Zendaya ကိုအကောင်းဆုံးကြည့်သင့်သည်မှာ Cop
သင်ဤသည်သင်တို့အတွက် Zendaya ပန်ကာတစ်ခုဖြစ်ပါက Zendaya ၏အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင် ၅ ခုကိုကြည့်ရှုရန် Zendaya ၏အကောင်းဆုံးပုံပန်းသဏ္areာန်မှာဒီမှာကြည့်ပါ။
ဒီနွေရာသီမှာ Brightness လေးတစ်ခုလုပ်ရန် Closet ထဲသို့ Pastels များထည့်ပါ
အကောင်းဆုံးသောအရောင်ဖျော့ဖျော့ကြည့်များကိုရေကူးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဘောလီးဝုဒ်နှင့်ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးများထံမှအကောင်းဆုံးသောနွေရာသီလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ Pastels ရန်
8 Celeb – Approved Sari သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင့်ကိုတည်ထောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်များဝတ်ဆင်ထားသည့်အကောင်းဆုံး Sari Drapes များအကြောင်းကိုလှည့်လည်
Dapper Cool ကိုကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်း ၈။ ခက်ခဲသောဂျင်းဘောင်းဘီ
ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ (၈) ယောက်သောဂျင်းဘောင်းဘီကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များကဖန်တီးထားသည်။ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ (၈) ယောက်သောဂျင်းဘောင်းဘီကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များကဖန်တီးထားသည်
ဒီမင်္ဂလာဆောင်ရာသီအတွက် Lehenga အင်္ကျီဒီဇိုင်းများ
ဤမင်္ဂလာဆောင်ရာသီကိုဤကျော်ကြားမှုမှအတည်ပြုထားသော timeless lehenga အင်္ကျီဒီဇိုင်းများနှင့်အတူအာရုံစိုက်ပါ။
ဤမင်္ဂလာဆောင်ရာသီ Desi Bridesmaid Dress Code Guide
IndiLuxe Couturier ၏အသွင်ပြောင်းခြင်း - လူငယ်များအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု
လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စတိုင်ကိုအခြေခံပြီးလူငယ်များအားလုံးအတွက် IndiLuxe မင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံအတွက်စျေး ၀ ယ်ခြင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုလုံး။
ဒီမင်္ဂလာဆောင်ရာသီကိုကြိုးစားရန် Lehenga နောက်ကျောအင်္ကျီဒီဇိုင်းများ
ဤတွင် cholis / အင်္ကျီများအတွက်အချို့သောခေတ်ပြိုင်နောက်ကျောဒီဇိုင်းများတစ် roundup ပါပဲ။ နောက်ကျောဒီဇိုင်းများအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သောအရာကိုတစ် ဦး ကျယ်ပြန့်ကြည့်ဘို့ရှေ့ဆက်သွားပါ။
ဒီမင်္ဂလာဆောင်ရာသီတောက်ပနေရန်သင့်အားကူညီရန် Sari Trends
ငါတို့သည်သင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ရာသီမှတဆင့် strut နှင့်အတူအပေါငျးတို့သ rounder sari ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆောင်ကြဉ်းငါတို့သည်သင်တို့မှတဆင့်ဒီမှတစ်ဆင့်လေပြေမှအားလုံး rounder sari ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆောင်ခဲ့မည်
အိန္ဒိယဘလော့ဂါများမှ Spring မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ Inspo ကိုယူပါ
နွေ ဦး ရာသီနီးပြီ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများလည်းဖြစ်ကြသည်။ အိန္ဒိယဘလော့ဂါအချို့သည်နွေ ဦး ဆောင်မင်္ဂလာပွဲများအတွက်အဓိက ၀ တ်စုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
Dia Mirza ၏မင်္ဂလာဆောင်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
Miss India အလှမယ် Dia Mirza သည်မွန်ဘိုင်း၌ရင်းနှီးသောအခမ်းအနားတစ်ခုတွင်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူမ၏မင်္ဂလာပွဲကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ
နေ့လည်စာကိုဤခေတ်မှီ Celeb-Approved အသွင်အပြင်များဖြင့်ပျော်ရွှင်စေပါ
ကောက်ပဲသီးနှံများသည်ထိပ်တန်းစွယ်စုံနှင့်လွယ်ကူစွာဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတိုင်းသည်သူတို့၏ဗီရို Stylish Crop Tops တွင်လိုအပ်သည်။
နာမည်ကြီးတွေဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ Power Power ကသင့်တော်ပါတယ်